Global Voices teny Malagasy » Mitokona Tsy Mety Mihinan-Kanina Ilay Mpampianatra Ambony Emira Arabo Any Am-ponja · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Mey 2017 4:59 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Emirà Arabo Mitambatra, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Nasser Bin Ghaith nandritra ny adihevitra misokatra momba ny “maha zava-dehibe ny jeo-politika ao amin'ny Faritra Helodrano Arabo” tamin'ny volana Desambra 2014. Pikantsary tamin'ny lahatsary YouTube navoakan'ny Foibe Arabo misahana ny Fikarohana sy ny Fanadihadiana Politika.
Nitokona tsy nihinan-kanina nanomboka tamin'ny 2 Aprily i Nasser Bin Ghaith, mpahay toekarena sady mpampianatra ambony ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra ho fanoherana ny fanasaziana azy folo taona an-tranomaizina noho ny lahatsoratra tamin'ny aterineto voalaza fa “manohintohina” ny fanjakana. Nanambara ny fitokonany tsy hihinan-kanina tamin'ny taratasy misokatra , izay naparitaky ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona i Bin Ghaith,.
Nosamborina tamin'ny volana Aogositra 2015 i Bin Ghaith. Taorian'ny fisamborana azy, nogadrain'ny manampahefanan'ny Emirà Arabo Mitambatra mangingina nandritra ny sivy volana izy. Nandritra ny fiakarana fitsarana  voalohany tamin'ny 4 Aprily tamin'ny herintaona, nilaza tamin'ny mpitsara izy fa voadaroka sy tsy navela natory nandritra ny fanagadrana azy.
Tamin'ny 29 Martsa 2017, nomelohin'ny Fitsarana Ambony Federaly ao Abu Dhabi tamin'ny fiampangana maromaro izy, anisan'izany  ny famoahana lahatsoratra antserasera izay “manohintohina ny mari-pamantarana sy ny soatoavin'ny fanjakana, ny politikam-panjakana anatiny sy ivelany sy ny fifandraisana amin'ny fanjakana Arabo iray” ka voasazy  folo taona an-tranomaizina izy. Ireo lahatsoratra ireo dia ahitana sioka izay nitsikeran'i Bin Ghaith mafy ny manampahefana Ejipsiana noho ny famoretana nataon'izy ireo tamin'ny taona 2013 tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny kianjan'i Rabaa izay manohitra ny fanesoran'ny miaramila ny filoha voafidy Muhammad Morsi. Niteraka fahafatesana sivily maherin'ny 800 ny famoretana, araka ny filazan'ny Mpanaramaso ny Zon'olombelona .
Voaheloka ho “namoaka vaovao tsy marina” ihany koa i Bin Ghaith tamin'ny filazana tao amin'ny Twitter fa tsy nomena fitsarana ara-drariny izy tamin'ny raharaha teo aloha  fantatra amin'ny anarana hoe “UAE 5″, izay nisamborina sy nampidirina am-ponja mpikatroka efatra miampy ny tenany noho ny fitakiana fanavaozana demaokratika ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Tany am-ponja efa ho sivy volana ireo mpikatroka talohan'ny namotsorana azy ireo tamin'ny faran'ny volana Novambra 2011, rehefa avy nahazo famelan-keloky ny mpitondra firenena.
Na dia afaka mampiakatra ny didim-pitsarana eo anoloan'ny Biraom-Piarovam-Panjakana ao amin'ny Fitsarana Tampony Federaly ao anatin'ny 30 andro aza i Bin Ghaith, dia nanapa-kevitra ny tsy hanao izany. Ny fampiakarana ny didim-pitsarana dia “tsy hanova na inona na inona fa hanome rariny ny didy ara-politikan'ny fitsarana,” hoy izy tamin'ny taratasiny avy any am-ponja. Ka ho solon'izany, nitokona tsy nihinan-kanina i Bin Ghaith mba hitaky ny famoahana azy tsy misy fepetra.
Misisika amin'ny tsy fananako tsiny aho ary mandà ny fiampangana rehetra hanenjehana ahy. Mahatsiaro tena ho malahelo sy kivy aho noho ny fitsarana tsy ara-drariny nataon'ny olona mitovy amiko sy ao amin'ny fireneko lazaina fa tanin'ny fandeferana sy ny fahasambarana.
Na dia eo aza ny olana ara-pahasalamana mihatra aminy, manohy ny fitokonany tsy hihinan-kanina mandritra ny 22 andro i Nasser Bin Ghaith ho fanoherana ny fanagadrana azy tsy ara-drariny
Efa atahorana ny fahasalaman'i Bin Gaith talohan'ny nanombohany ny fitokonana hifady hanina. Tany am-piandohan'ity taona ity, naneho ny ahiahiny  [mg] momba ny fiharatsian'ny fahasalaman'i Bin ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona maromaro, tahaka ny Foibe Helodrano misahana ny Zon'Olombelona (GC4HR), ny Fanentanana Iraisampirenena ho amin'ny Fahalalahana ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, ny Foibe Iraisam-pirenena misahana ny Rariny sy ny Zon'Olombelona, ary ny Foiben'ny Zon'olombelona Ao Emira. Araka ny filazan'ny GC4HR, tsy ampy ny zavatra nataon'ny manampahefana Emirà tamin'ny fanomezana ny fitsaboana ilainy. Efa herinandro vao nahazo dokotera hizaha ny fanaintainan'ny nifiny i Bin Ghaith, ary tsy nanaja ny fanomezana fanafody ho an'ny tosidràny ny manampahefana. Saingy hoy i Bin Ghaith: “tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manao fitokonana tsy hihian-kanina aho mba hamerenana ny fahafahako”.
Ny sary eto ambany, noforonin'ny Visualizing Impact , dia manoritra ny zavatra niainan'ny olona iray tamin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina nandritra ny fotoana manokana, nalaina tamin'ny fikarohana avy amin'ny Forensic Science International,  ny Gazety ho an'ny Fikambanana Ara-pitsaboana Amerikana  sy ny Gazety Ara-pitsaboana Britanika .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/02/98979/
 tamin'ny taratasy misokatra: http://icfuae.org.uk/news/nasser-bin-ghaith-declares-hunger-strike-letter-sent-his-prison-cell
 ny fiakarana fitsarana: http://www.middleeasteye.net/news/disappeared-uae-economist-claims-prison-torture-first-court-appearance-853197903
 famoretana : https://en.wikipedia.org/wiki/August_2013_Rabaa_massacre
 Mpanaramaso ny Zon'olombelona: https://www.theguardian.com/world/2014/aug/16/rabaa-massacre-egypt-human-rights-watch
 raharaha teo aloha: https://en.wikipedia.org/wiki/UAE_Five
 naneho ny ahiahiny: https://mg.globalvoices.org/2017/01/31/94696/
 Gazety ho an'ny Fikambanana Ara-pitsaboana Amerikana: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=208176
 Gazety Ara-pitsaboana Britanika: http://www.bmj.com/content/315/7112/829